DEG DEG:- Rabshado iyo is-rasaaseyn haatan ka socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Rabshado iyo is-rasaaseyn haatan ka socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool
Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in goordhaw uu halkaasi ka bilaawday rabshado iyo is-rasaaseyn u dhaxeeysa ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland iyo dadka deegaanka halkaas.
Rabshadahaan ayaa sida la sheegay bilaawday kadib markii magaalada Laascaanood, gaar ahaan meel ay ciidamada Somaliland ku sugnaayeen lagu dilay nin shacab ah, islamarkaana aanay ciidamadaas wax talaabo ah ka qaadin ninkii falka dilka ah geystay.
Sidoo kale, dadkaan ayaan waxay sheegayaan in ciidamada Somaliland ay si ula kac ah ugu fiirsadeen dilka loo geystay qofkaasi rayidka ah, islamarkaana ay iska indha-tireen inay gacanta ku dhigaan gacan ku dhiiglihii falkaasi dilka ah ka dambeeyay.
Arrintaasi ayaa waxay keentay in ciidamada Somaliland iyo dadka ku sugan magaalada Laascaanood uu halkaasi ku dhexmaro dagaal culus, waxaana inta la xaqiijiyay rabshadahaan ku geeriyootay 2 askari oo ka tirsan ciidanka Somaliland, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay ku dhawaad 10 qof oo u badan dad shacab ah.
Dhinaca kale, ma jirto wax war ah oo kasoo baxay mas’uuliyiinta magaalada Laascaanood ay kaga hadlayaan rabshadahaan haatan ka soconaaya magaaladaasi, waxaana haatan kacsan xaaladda magaalada Laascaanood, iyadoona uu hakad ku yimid isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee halkaasi ka jiray.
Dhawaan ayay ahayd markii magaalada Laascaanood ee gobolka Sool lagu dhex dilay sarkaal ka tirsanaa shirkadda Dahabshiil, iyadoo mid kalena lagu dhaawacay, iyadoona dhinaca kale aysan jirin cid falkaasi dilka ah ee magaaladaasi ka dhacay loo soo qabtay.